माधव नेपाल लगायतलाई आममाफीको घोषणा: ओलीको अर्को चलाखी, भित्री दाउ अर्कै ! - Rising Dainik
July 22, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on माधव नेपाल लगायतलाई आममाफीको घोषणा: ओलीको अर्को चलाखी, भित्री दाउ अर्कै !
काठमाडौं । आफ्नै एक्लो निर्णयमा दोस्रोपटक पनि राष्ट्रपति बनाइएकी विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष अघि बढेपछि एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नराम्ररी झस्किएका छन् ।
एमालेको केही दिनदेखि लगातार बसेर आज सकिएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा ओलीले साउन ३ गते प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पक्षमा मतदान गर्ने २२ जना सांसदलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । स्पष्टीकरण सोधिएका सांसदहरुले अलग अलग जवाफ दिएका छन् । उनीहरुले ओलीकै कारण यो अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उल्टै उनलाई नै कार’बाही गर्न मागसमेत गरेका छन् । ओलीले पार्टीको निर्णयबिना नै दुईपटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन किन गरेको ? भनेर प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि देखिएको समस्याले एमाले फुटको संघारमा पुगेको छ ।
आज उपत्यकामा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले देउवाको पक्षमा लाग्ने सांसदलाई आमफाफी दिने घोषणा गरेका छन् । ओलीले पार्टीमा सहकार्य गरेर जान सकिने भन्दै लचकता देखाएका छन् । पटकपटक का’रबाही गर्छु भनेर ओलीले अर्को पक्षका सांसदलाई धम्क्याउँदै आए पनि उनीहरुले पनि कारबाही होला भन्ने सोचेका थिएनन् ।
प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा २ सय ७१ सांसदमध्ये देउवाले १ सय ६५ मत पाएका थिए । दुई तिहाईका लागि प्रतिनिधिसभामा १ सय ७८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ, देउवाले प्राप्त गरेको भन्दा यो १३ मत कम हो । प्रतिनिधिसभाको यो बैठकमा केही सांसद अनुपस्थित भए भने केही आएर पनि तटस्थ रहे । ओलीले गत वैशाख २७ गते संसदमा विश्वासको मत लिँदा ९३ मत पाएका थिए । यसपालि उनको पक्षमा १० जना सांसद घटेपछि देउवाको विरोधमा ८३ मतमात्र परेको थियो ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर संविधान मिच्ने काम गरेको भन्दै अहिले आएर राष्ट्रपति पनि आलोचित भएकी छिन् । संसदको दुई तिहाइले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । महाअभियोग दर्ता गर्न प्रतिनिधिसभाको २५ प्रतिशत सांसदको हस्ताक्षर चाहिन्छ । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), एमालेको नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक भएर प्रधानमन्त्रीको रुपमा रहेका ओलीको विरोधमा हिजोसम्म लागेका थिए । उनीहरुले लक्ष्य पूरा भएपछि गठबन्धन लामो समयसम्म टिकाउने अडान लिएका छन् ।
ओलीको प्रधानमन्त्री पद गएपछि राष्ट्रपति भण्डारी पनि चिन्तित छन् । नेपाल समूहबाट गत आइतबार संसदमा मतदान गरेका ओलीका खास सांसदले पनि देउवालाई मतदान गरेका थिए । उनीहरुले अझै पनि धेरै सांसदले ओलीलाई छोड्ने भएकाले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन सजिलो हुने दाबी गर्दै आएका छन् । आफ्नो पद गएसँगै राष्ट्रपति पनि खुस्किने भएपछि ओलीले आफ्ना पार्टीका सांसदलाई गलत गरे पनि आममाफी दिएको बताएका छन् । झट्ट हेर्दा पार्टी एकताको लागि ओली उदारजस्तो देखिए पनि यसको प्रत्यक्ष असर राष्ट्रपतिलाई पर्ने भएपछि ओलीले नयाँ विकल्प खडा गरेका छन् ।
रोल्पामा चार्जमा राखेको मोबाईल चलाउँदा क’रेन्ट लागेर एकको मृ’त्यु
लमजुङमा बुहारीको ज्या’न लिएको अभियोगमा सासु प’क्राउ
यस्तो सहमति पछि उठ्यो कञ्चनको श’व, अ’न्त्यष्टिमा पुरै गाउँ शो’काकुल (भिडियो हेर्नुस्)
March 9, 2021 Ramash Kunwar